Wireless NDI Bundles Conference Room Systems
Home > Browse > Complete Systems > Wireless NDI Bundles
PTZOptics PTVL-NDI-ZCAM WirelessCable Bundle
A WirelessCable transmitter and receiver bundled with a PTZOptics Variable Lens NDI ZCAM to capture wide-angle shots and transmit them wirelessly to a local network or PC
Available rebate of $50 from PTZOptics (Q1 2020)
PTZOptics PT12X-NDI-ZCAM WirelessCable Bundle
A WirelessCable transmitter and receiver bundled with a PTZOptics 12X NDI ZCAM, providing 12X lossless optical zoom and high-quality video transmitted wirelessly to a local network or PC.
PTZOptics PT20X-NDI-ZCAM WirelessCable Bundle
A WirelessCable transmitter and receiver bundled with a PTZOptics 20X NDI ZCAM, providing 20X lossless optical zoom and high-quality video transmitted wirelessly to a local network or PC.
PTZOptics 12X-NDI-WH WirelessCable Bundle
A WirelessCable transmitter and receiver bundled with a PTZOptics 12X-NDI Network Broadcast Camera, providing 12X lossless optical zoom, PTZ controls, and high-quality video transmitted wirelessly to a local network or PC.
Available rebate of $100 from PTZOptics (Q1 2020)
PTZOptics 12X-NDI-GY WirelessCable Bundle
PTZOptics 20X-NDI-WH WirelessCable Bundle
A WirelessCable transmitter and receiver bundled with a PTZOptics 20X-NDI Network Broadcast Camera, providing 20X lossless optical zoom, PTZ controls, and high-quality video transmitted wirelessly to a local network or PC.
PTZOptics 20X-NDI-GY WirelessCable Bundle
PTZOptics 30X-NDI-WH WirelessCable Bundle
A WirelessCable transmitter and receiver bundled with a PTZOptics 30X-NDI Network Broadcast Camera, providing 30X lossless optical zoom, PTZ controls, and high-quality video transmitted wirelessly to a local network or PC.
PTZOptics 30X-NDI-GY WirelessCable Bundle